भद्रपुर, २५ असार । जिल्ला पशुसेवा कार्यालय झापाले चालु आवमा जिल्लाभरिमा युवा लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत रु ६७ लाख अनुदान वितरण गरेको छ । पशुपालन, बाख्रापालन, बङ्गुरपालन र पशुपक्षी बजार प्रवद्र्धन गर्न सो अनुदान वितरण गरिएको हो । एक फर्मलाई रु दुई लाखदेखि रु तीन लाखसम्म अनुदान दिइएको र तिनको... विस्तृतमा
कृषि विकास बैंकले दियो आठ महिनामा पाँच करोड कर्जा
कञ्चनपुर, २५ असार । कृषि विकास बैंक बैंकिङ कार्यालय झलारी कञ्चनपुरले आठ महिनाको अवधिमै १३१ व्यक्तिलाई रु पाँच करोड कर्जा प्रदान गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई सहज रुपमा पुँजीको व्यवस्था गर्नका लागि बैंकले किसानलाई माछा, कुखुरापालन, केराखेती र पावर ट्रेलर खरिद गर्नका लागि कर्जा... विस्तृतमा
पर्यटकीयस्थल चिसापानी लेक पुग्ने पदमार्ग निर्माण
पर्वत, २५ असार । एक प्रसिद्ध धार्मिक एवम् पर्यटकीयस्थल चिसापानी लेक पुग्ने पदमार्ग निर्माण भएको छ । समुद्री सतहदेखि झन्डै दुईहजार ३०० मिटरको उचाइमा अवस्थित पर्वतको लुङ्खुदेउरालीमा रहेको चिसापानी लेकमा पुग्ने पदमार्ग निर्माण गरिएको हो । पर्यटन कार्यालय पोखराको रु १० लाख सहयोग र द... विस्तृतमा
काठमाडौं, असार २४: गत साताको नेप्से परिसूचक ३ दशमलव ४८ अङ्कले घटेको थियो । बढिरहेको शेयर बजारमा गत साता भने सामान्य करेक्सन देखा परेको छ । आइतबार १ हजार ७ सय १९ दशमलव २ विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक साताको अन्तिम व्यापार दिन विहीबार घटेर १ हजार ७ सय १५ दशमलव ७२ विन्दुमा पुगेको थियो । गत सा... विस्तृतमा
म्याग्दी, २४ असार । नदीमा बाढी आएपछि म्याग्दी र मुस्ताङमा रहेका दुई वटा जलविद्युत् आयोजना बन्द भएका छन् । म्याग्दीको नारच्याङस्थित दुई मेघावाट क्षमत्ताको तातोपानी साना जलविद्युत् आयोजना र मुस्ताङको कोवाङमा रहेको २४० किलोवाट क्षमत्ताको चोकोपानी जलविद्युत् आयोजना बन्द भएको हो । आयोजना बन्द... विस्तृतमा
काठमाडौँ, २४ असार | साताको अन्तिम दिन शुक्रबार आज सुनचाँदीको भाउ घटेको छ। आज सुन प्रतितोला १ सय रुपैयाँ कम हुँदै ५८ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। बुधबार र बिहीबार सुन ५९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै बुधबार अढाई वर्षयताकै महँगो भएर ९ सय ५ रुपैयाँ प्रतितोला पु... विस्तृतमा
आगामी अक्टोबरसम्म पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको (डिपिआर)
काठमाडौँ, २३ असार: पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका लागि आगामी अक्टोबरसम्म विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर०लाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको छ । बुधबारसम्म सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय चौथो संयुक्त बैठक ९प्राविधिक रुपमा नभनिएको०मा डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने र सबै विषय टुङ्ग्याउ... विस्तृतमा
अाँखुखाेला कम्पनीले ८ लाख कित्ता साधारण सेयर जारी गर्ने
काठमाडौँ, २३ असार | आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीले ८ लाख कित्ता साधारण सेयर जारी गर्ने भएको छ। कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा साधारण सेयर जारी गर्नका लागि आवेदनसमेत दिइसकेको छ। आयोजनाका प्रबन्धनिर्देशक विश्वनाथ कँडेलले कम्पनीले प्रतिकित्ता रु. १ सय अङ्कित मूल्यका ८ लाख कित्ता साधारण सेयर जारी... विस्तृतमा
काठमाडौँ, २३ असार । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले बुधबारसम्म दुई लाख २३ हजार ८३० घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गरेको छ । अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये २४ हजार ४२८ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रु ५० हजार जम्मा गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । ... विस्तृतमा
काठमाडौं, २३ असार: भारतले हुलाकी राजमार्गको काम अघि बढाउन परामर्शदाता (कन्सल्ट्यान्ट) तोकेर पठाएको पत्रमा अझै अस्पस्टता रहेको पाइएको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम अघि बढाउने विषयमा नेपालले पठाएको पत्रको जवाफ भारतले साढे ३ महिनापछि केही दिनअघि मात्र दिएको हो । भारत सरकारको सडक याता... विस्तृतमा
असार २२, काठमाडौं: बुधवार नेप्से परिसूचक २ दशमलव ६९ अङ्कले बढेको छ । मध्याह्नमा १ हजार ७ सय २३ दशमलव १३ विन्दुमा पुग्न सफल भएको बजार केही बढेको हो । बजार बन्द हुँदा नेप्से १ हजार ७ सय १५ दशमलव ७२ विन्दुमा आइपुगेको छ । यो अघिल्लो दिनको तुलनामा शून्य दशमलव १६ प्रतिशत बढी हो । असार मसान्त अन्त्य ह... विस्तृतमा
चीन सरकारको सहयोगमा नेपाल–चीन सीमा जोड्ने सडकको स्तरोन्नति सुरु
काठमाण्डु, २२ असार: चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा उत्तरी सीमासित जोडिएका दुई सडकको मर्मत र स्तरोन्नति सुरु भएको छ । अरनिको राजमार्गको ११४ किलोमिटर सडकमध्ये जुरेदेखि कोदारीसम्मको २२ किमी सडकको जाँच चिनियाँ प्राविधिक समूहले सुरु गरेको सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवम् वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख... विस्तृतमा
मौद्रिक नीति यस्तो आउँदैछ रिपोर्टमा
काठमाडौं,२२ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षका लागि नयाँ मौद्रिक नीति केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्दैछ । ल्याउन लागेका हुन् । गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले आफ्नो कार्यकालको दोश्रो तथा राष्ट्र बैंकको चौधौँ मौद्रिक नीति ल्याउँदैछन् । गत वर्ष कृषि क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी बढाउने, बैंक तथा वित्तीय... विस्तृतमा
६ विकास बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरुमा गाभिँदै
काठमाडौँ, २२ असार । नेपाल राष्ट्र बैैंकले तोकेअनुरुप चुक्ता पुँजी पुर्याउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मर्जर र एक्विजिसनलाई प्रमुख आधार बनाएका छन् । यसमध्ये पनि गाभ्ने गाभिने (मर्जर) प्रक्रिया झन्झटिलो लामोसमेत हुने भएकाले बैंकहरू पछिल्लो समय खरिद बिक्री (एक्विजिसन)लाई प्राथमिकता द... विस्तृतमा
नेप्से परिसूचक ३.६२ अंकले घट्यो
काठमाडौं, २१ असार: बुधबार पुँजी बजारमा कारोबार रकम र नेप्से परिसूचक दुबै ओर्लिएका छन् । बीमा, विकास बैंक, फाइनान्स समूहको सेयर मूल्य घटेपछि बजार झरेको हो । दिनभरमा नेप्से ३.६२ अंकले ओर्लियो भने कारोबार रकम पनि एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँमा सीमित भयो । केही समययता औसत कारोबार रकम एक... विस्तृतमा